အခြေခံပညာကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှု | USAHello | USAHello
ယနေ့ကမ်ဘာပျေါတှငျ, ငါတို့ရှိသမျှသည်ကွန်ပျူတာများနှင့်အခြားနည်းပညာအသုံးပြုရန်လိုအပ်. ကွန်ပျူတာများကိုသငျသညျအလုပျကိုကူညီရှာဖွေနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်သည်. ဤစာမျက်နှာကိုအခြေခံကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုရရှိမှုများအတွက်အချို့အရင်းအမြစ်များကိုလည်းပါဝင်သည်.
ကွန်ပျူတာသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုသိရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်. အများစုမှာကုမ္ပဏီများသည်သင်အွန်လိုင်းအလုပ်အကိုင်များလျှောက်ထားချင်. သငျသညျကိုအီးမေးလ်ကတဆင့်သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုမှစကားပြောနိုင်သည်, ချက်တင်, နှင့်ဗီဒီယို. သင်ချင်တယ်သတင်းအချက်အလက်မဆိုအမျိုးအစားလည်းရှာဖွေနိုင်သည်. သငျသညျအခမဲ့အခြေခံကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုကိုသင်ယူနိုင်မည့်အင်တာနက်အပေါ်အများကြီးတည်ရာအရပ်ရှိပါတယ်.
ဤရွေ့ကားအကောင်းဆုံးနှစ်ခုရှိပါတယ်, အခမဲ့, ကျွန်တော်တို့ဟာအွန်လိုင်းတွေ့ပြီကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုက်ဘ်ဆိုက်များ.
ဒစ်ဂျစ်တယ်သင်ကွန်ပျူတာအခြေခံနှင့်အင်တာနက်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူကူညီရန်တော်တော်များများအတန်းရှိပါတယ် Learn. သင်တစ်ဦးကွန်ပျူတာနှင့် operating system မြား၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်. operating systems သင့်ကွန်ပျူတာကိုပြေးကူညီအစီအစဉ်များဖြစ်ကြောင်း. အီးမေးလ်ကသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသင်တန်းများရှိပါသည်.
အင်တာနက်ပေါ်မှာဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ခြင်းအရေးကြီးပါတယ်. သငျသညျသတိမထားဘူးဆိုရငျ, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုအင်တာနက်ပေါ်ခိုးယူခံရနိုင်. တစ်စုံတစ်ယောက်ကကိုယ်ငွေနှင့်ဝယ်ယူမှုစေရန်အသုံးပြုနိုင်စေခြင်းငှါ,. သငျသညျပုဂ္ဂလိကသင့်အချက်အလက်များကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်အတန်း ယူ. Scan ကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်. သည်အခြားအတန်းကလူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့သငျသညျသွန်သင်မည်နှင့်မည်သို့အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ဖို့.
ဒစ်ဂျစ်တယ်သင်ခန်းစာတွေကိုလိုက်နာဖို့ရိုးရှင်းတဲ့များမှာလေ့လာပါ. ဥပမာ, သင်လုပ်နိုင်သည် ဌဘယ်လောက်ဝင်ငွေ သို့ အင်တာနက်ပေါ်မှာဘေးကင်းလုံခြုံနေဖို့. သို့မဟုတ်သင်ဘယ်လောက်မှလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် Microsoft Word ကိုစာရွက်စာတမ်းများဖန်တီးကယ်တင်.
GCFLearnfree သင်ကွန်ပျူတာများအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကူညီပေးဖို့အများကြီးကြီးမြတ်အွန်လိုင်းသင်တန်းများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုရှိပါတယ်. သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်ဘာကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်ကို set up ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်. အဆိုပါအတန်းစာရွက်စာတမ်းများကိုသိမ်းဆည်းရန်မည်သို့မည်ပုံအကြောင်းပြောဆိုခြင်းနှင့်သင်ပြုသည့်အခါသူတို့သွားပါရှိရာ. သည်အခြားအတန်းအင်တာနက်ကိုသုံးပါနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာ၏ကောင်းသောဂရုစိုက်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်း. ထိုသူတို့ကလည်းရှိ အင်တာနက်လုံခြုံရေးအတန်း.
ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုရှင်းပြသောတစ်ဦး GCFLearnfree.org ကဗီဒီယို Watch
Gmail ကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုအခြားဗီဒီယို Watch
အင်တာနက်လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်. သင်၏သားသမီးသှနျသငျ
သင့်ကလေးအင်တာနက်လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိရန်အဘို့အဒါဟာအလွန်အရေးကြီးပါသည်. ဒါဟာသူတို့ကိုအင်တာနက်အပေါ်သူတို့မသိရပါဘူးလူတွေကိုပြောနေတာ၏အန္တရာယ်များကိုနားလည်ကူညီပေးပါမည်. NetSmartz.org နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်. သင်၏သားသမီးသှနျသငျ.
သင်တစ်ဦးလူတန်းစားသှားဖို့ပိုနှစ်သက်ပါ့? သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လေ့လာသင်ယူခဲအချိန်ရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, ကဆရာမရှိသည်ဖို့ကောင်းသောနိုင်ပါတယ်! အများစုမှာအများပြည်သူစာကြည့်တိုက်သငျသညျတကျရောကျနိုငျအခမဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းတွေရှိတယ်. သင့်ရဲ့အနီးဆုံးစာကြည့်တိုက်ကိုရှာပါ သို့မဟုတ်ရှာဖွေရေး FindHello သငျသညျအနီးလူကြီးများအတွက်ကွန်ပျူတာသင်တန်းတွေကိုရှာဖွေ.